पहिलो त्रैमासमा विकास बैंकको नाफाः मुक्तिनाथ र महालक्ष्मी अब्बल, नोक्सानीमा तीन बैंक, कुनको कति ? - Arthatantra.com
पहिलो त्रैमासमा विकास बैंकको नाफाः मुक्तिनाथ र महालक्ष्मी अब्बल, नोक्सानीमा तीन बैंक, कुनको कति ?
काठमाडौं । संचालनमा रहेकामध्ये १६ विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
यीमध्ये १३ कम्पनीको नाफा गरेका छन् भने ३ कम्पनीका नोक्सानीमा देखिएका छन् । चालु आवको असोज मसान्तसम्म १३ कम्पनीले १ अर्ब ६३ करोड ७२ लाख १९ हजार रुपैयाँ नाफा गरेका छन् ।
नाफा धेरै कमाउनेमा मुक्तिनाथ विकास बैंक पहिलो स्थानमा छ । बैंकले चालु आवको पहिलो त्रैमासमा ३४ करोड ५५ लाख ८७ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको छ । जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने १७.४८ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको असोज मसान्तमा बैंकले २९ करोड ४१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।
दोस्रो स्थानमा रहेको महालक्ष्मी विकास बैंकले चालु आवको पहिलो त्रैमासमा २३ करोड ५ लाख ३४ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनमा ४४.२८ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको असोज मसान्तमा बैंकले १५ करोड ९७ लाख ८० हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो ।
यस्तै, गत वर्षको असोज मसान्तको तुलनामा ६५.६४ प्रतिशतले नाफा बढाएको ज्योति विकास बैंकले यस वर्षको सोही अवधिमा भने २१ करोड ७८ लाख ५६ हजार र ९० प्रतिशतले नाफा बढाएको लुम्बिनी विकास बैंकले २१ करोड ३१ लाख ६४ हजार रुपैयाँ कमाएका छन् ।
उक्त अवधिमा सबैभन्दा कम ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको रहेको छ । बैंकले चालु आवको असोज मसामन्तमा ६ लाख १६ रुपैयाँ मात्रै नाफा कमाएको छ । गत वर्ष ९४ लाख ३७ हजार रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको बैंकले यस वर्षको उक्त अवधिमा भने १०६.५३ प्रतिशतले नाफा बढाएको हो ।
चालु आवको असोज मसान्तमा तीन विकास बैंक नोक्सानीमा देखिएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक ११ करोड १ लाख १७ हजार रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको छ ।
यस्तै, सिन्धु विकास बैंक ६६ लाख ६९ हजार र नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक ९ लाख ११ हजार रुपैयाँ नोक्सानीमा देखिएका छन् ।
उक्त अवधिमा गरिमा विकास बैंकले १८ करोड ४४ लाख १९ हजार, कामना सेवा विकास बैंकले १७ करोड ५७ लाख ४७ हजार, शाइन रेसुङ्गाले १४ करोड ७३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएका छन् ।
यस्तै, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा ५ करोड ४४ लााख ३१ हजार, मितेरी डेभलपमेन्टको २ करोड ५३ लाख ४२ हजार, कर्णाली डेभलपमेन्टको २ करोड २७ लाख ६ हजार, एक्सेल डेभलपमेन्टको १ करोड ८२ लाख ९९ हजार र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको ११ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
वि.सं.२०७८ कात्तिक २५ बिहीवार १७:०४ मा प्रकाशित
News Views: 489
अघिल्लाे फेरि १० %ले बढ्यो मानुषी लघुवित्तको सेयर मूल्य: आज ६० कित्ता मात्रै बिक्री, प्रतिकित्ता कति ?
पछिल्लाे राधी विद्युत कम्पनीलाई नेप्सेको चेतावनी : ‘तीन कार्यदिन भित्र विवरण पेश नगरे कारवाही हुन्छ’